काठमाडौं (पहिचान) भदौ २ – काठमाडौं हाडीगाउँका अर्मोन्तशमसेर राणा जन्मँदा केटा थिए। उनको हाउभाउ, बोली, लवाइ-खुवाइ केटाकै थियो। आफूलाई कुनै कोणबाट केटी जस्तो देख्थेनन् उनी।
सानैबाट कम्मर मर्काइ-मर्काइ नाच्ने खुबीले पनि अर्मोन्तलाई ‘केटी’ झल्काउन टेवा पुर्याएको थियो। कसैसँग ठूलो स्वर नगर्ने, लजालू स्वभावले झन् बढावा दिन्थ्यो।
उनको मनले प्रश्न गर्याे, ‘साथीहरूकै आँखाले मात्र किन खराब देख्छन्? ‘छक्का’ भनेको के हो? मैले कस्लाई छक्काएँ र?’
‘केटामान्छे नजिक आउँदा अनुहार रातो हुथ्यो, डर लाग्थ्यो, ढुकढुकी दुई गुणा बढ्थ्यो,’ उनी ती दिन सम्झँदै सुनाउँछन् ‘मलाई त केटा नै मनपर्न थालेको रहेछ। मलाई मात्रै यो के भएको होला भनेर खुबै डर लाग्यो।’
‘छोरीहरू एउटी सानैमा हराइन्, एउटीको मृत्यु भयो,’ अर्मोन्ततिर देखाउँदै आमा मंगलीमाया भन्छिन् ‘यो त बोल्दा नि बोल्दैनथ्यो, लजाउँथ्यो। जे भने नि खुरुखुरु मान्ने। छोरी नै जस्तो लाग्थ्यो, त्यसैले छोरी भन्थेँ।’
‘यसै त छोरी बन्न मन लागेको, आमाले झन् छोरी भन्ने, छोरी झैं गर्ने, दंगै पर्थेँ,’ अर्मोन्त खुसी साट्छन्।
छोराको आनीबानी नियालेर बुबा गौरव राणाले भनेको सम्झिन्छन् अर्मोन्त, ‘कान्छी त केटी जस्तै बन्न खोज्छ, अब एउटा राम्री केटी खोजेर यसको बिहे गरिदिने हो।’
आफ्नो मनोभाव जानेर होइन, बुझेर पनि होइन। उनले पनि मस्किँदै मनमा लागेको कुरा बुबालाई भने, ‘नाइँ, मलाई त केटा मनपर्छ, म केटासँग पो बिहे गर्ने हो।’
‘छोरालाई जे मन लाग्छ त्यही हुन्छ नि। मलाई त खुब्बै खुसी ला’छ,’ मंगलीमायाले हाँस्दै भनिन्।
‘परिवारको साथ, सहयोग नपाएर भौतारिँदै हिडेका थुप्रै साथी मलाई देखेर डाह गर्छन्,’ अर्मोन्त पुलकित हुँदै सुनाउँछन्, ‘कहिलेकाहीँ त आफैंलाई आफ्नो भाग्य देखेर आरिस लाग्छ। मेरा आमाबुबाले मलाई बुझ्नुभयो। समाज पनि स्वीकार्न बाध्य भयो।’
जिस्केर होस् वा हाँसो ठट्टामा, अर्मोन्तको वास्तविकता उजागर हुँदै गयो। हाँडिगाउँ छाडेर लाजिम्पाट आइसकेका थिए। नील हिरा समाज (ब्लुडाइमन्ड सोसाइटी)को भवन देखाउँदै छिमेकी महिलाले जिस्काइन्, ‘ऊ त्याँ हेर त, त्यो घरमा तँ जस्तै मान्छे आउँछन्। तँ पनि अब त्यहीँ जा।’
‘एकछिन त म अचम्म परेँ, केटा मान्छे कसरी केटी बन्यो?’ अर्मोन्त सुनाउँछन्, ‘तर आफूलाई पनि त्यस्तै बन्न मन लागेको हो भन्ने चाहिँ छर्लंग भएँ।’
‘छोरा भए पनि आफ्नै हो, छोरी भए पनि आफ्नै,’ मंगलीमाया निर्धक्क सुनाउँछिन्, ‘अरुले जे सुकै भनोस्, बुढाले पनि कहिल्यै दुःखी मन गरेनन्।’
नियमित, निरन्तर आफ्नो पहिचानसँग जुझ्दै आएका आर्मोन्त अहिले अभियन्ता भएका छन्। समयअन्तरालमा नील हिरा समाजसँगै जोडिए। आफूजस्तै ठूलो जमात देखेपछि संघर्ष गर्ने साहस बढेको छ। हिजो आफ्ना लागि लड्थे। आज अरूका लागि लड्ने भएका छन्।
‘मेरा आमाबुबाले पढ्न पाउनुभएन, तै पनि मलाई बुझ्नुभयो,’ अर्मोन्त भन्छन् ‘पढेलेखेका, बुझेका परिवारले नै आफ्ना सन्तान स्वीकार्न मान्दैनन्। घरबाट निकाल्छन्, मरोस् भनेर छाडिदिन्छन्, समाजको तितो यथार्थ यही हो।’